Mogadishu Journal » Aurier ayaa ku biiraya Villarreal ka dib bixitaankii Tottenham
Aurier ayaa ku biiraya Villarreal ka dib bixitaankii Tottenham
Serge Aurier ayaa ku biiray kooxda LaLiga Villarreal ka dib markii uu ka tagay Tottenham maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga bishii hore.
Daafaca dambeedka ayaa soo afjaray waayihiisii ​​Spurs ka dib markii uu ogolaaday in si wada jir ah loo joojiyo qandaraaskiisa.
Aurier ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ka sii wadan doona Spain, isagoo kula biiri doona kooxda heysata Europa League heshiis ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka, iyadoo dooq u leh inuu sii dheereysto joogitaankiisa labo olole oo dheeri ah.
28-jirka kabtanka u ah Ivory Coast ayaa 110 kulan u saftay Tottenham kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Paris Saint-Germain sannadkii 2017, isagoo u dhaliyay siddeed gool.
Aurier wuxuu ka caawiyay kooxda reer London inay gaarto finalka Champions League sannadka 2019, iyo sidoo kale bandhigga EFL Cup laba sano kadib.
Waxa kale oo uu leeyahay khibrad ballaadhan oo heer caalami ah, isagoo 70 kulan u saftay xulkiisa.
Villarreal oo aan laga adkaan ayaa ku jirta kaalinta 11 -aad ee LaLiga, waxay badisay laba kulan halka ay barbaro gashay 5 ka mid ah todobadii kulan ee furitaanka xilli ciyaareedka.
Laftagareen oo guddi u saaray shacabka laga soo masaafuriyey Laascaanood (Akhriso)
Facebook, WhatsApp iyo Instagram oo aan shaqeyneyn meelo ka mid ah caalamka